गुणकारी ओखरको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउछ जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
खानपान, घरेलु उपचार
ओखर विभिन्न भिटामिनको राम्रो स्रोत हो । ओखरमा शरीरलाई चाहिने भिटामिन–ई, भिटामिन–बी, भिटामिन–बी ६ जस्ता अत्यावश्यक तत्व पाइन्छ अनिद्राको समस्या भएकाहरूलाई ओखर रामबाण हो । ओखरमा पाइने मेलाटोनिन नामक तत्वले निद्रा लगाउने गर्छ ।
सुत्नुअघि भिजाएको ओखर खानाले मीठो निद्रा लाग्छ अथवा खानासँगै सलादमा ओखर छरेर पनि खान सकिन्छ । तिहारमा भाई पूजाका लागि नभई नहुने ओखरको धार्मिक मात्र नभई स्वास्थ्यको दृष्ट्रिकोणले पनि निकै लाभदायी छ । ओखरको नियमित सेवनले शरीरलाई पोषण प्रदान गर्नुको साथै विभिन्न रोगबाट बचाउन समेत मद्दत गर्दछ ।
दिनहु एक ओखर खाँदा शरीरमा ऊर्जा कायम रही कोलेस्ट्रोल पनि नियन्त्र हुन्छ । र यसमा भएको एन्टीअक्सिडेन्ट र ओमेगा थ्री फ्याट्टी एसिडले मुटु स्वस्थ राख्छन् । यसले जाडोमा शरीरलाई तातो र ऊर्जाशील बनाउनका मदत गर्छ।
यसको सेवनले जाडोमा शरीरलाई तातो बनाउन सहयोग पुर्याउछन् । यसमा जरूरी पोषक तत्त्व, मिनरलहरू, एन्टीअक्सिडेन्ट र भिटामिन हुन्छन् जसले शरीरका धेरै रोगहरूबाट छुटकारा पाउछन् ।
दिनहुँ दूधका साथ ओखर खाँदा घुँडा, जोर्नी र कम्मर दुख्ने कम हुन्छ । बच्चाहरूलाई दूधसँग ओखर खुवाउँदा दिमाग तेजिलो हुन्छनन् । यसमा मेलाटोनिन हर्मोन हुन्छ जसले राम्रो निद्रा लाग्न सहयोग गर्छन् । ओखरको सेवनबाट महिलामा मधुमेह र स्तन क्यान्सर रोगहरु कम हुन्छन् ।
यसमा भएका भिटामिन बी र एन्टीअक्सिडेन्ट गुणले छालालाई सुब्खापन र फी –याडिकलबाट बचाउँछ ।
ओखरका फाइदा, यस्ता छन्
-ओखरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन बी कम्प्लेक्सका साथैओखरमा विभिन्न मिनरल, म्याग्नेसियम, जिंक, क्याल्सियम, आइरन, कपर, भिटामिनजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छन् । जुन गर्भवती महिलाका लागि पनि निकै लाभदायक हुन्छ ।
-ओखरको सेवनले मानसिक समस्या कम गर्नुका साथै तनावबाट मुक्ति मिल्छ । यसको नियमित सेवन गर्नाले मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाईराख्न मद्दत गर्छ ।
-ओखरमा फ्याटको मात्रा कम हुने भएकाले वृद्धवृद्धाहरूका लागि निकै लाभदायक हुन्छ ।ओखर मधुमेहका बिरामीका लागि पनि यो उत्तिकै लाभदायक छ ।
-ओखरमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर हुन्छ जसले पाचनक्रियालाई मजबुत बनाउँछ । यसको नियमित सेवनले कब्जियत सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्नुका साथै
मृर्गौलामा पत्थरी हुनबाट जोगाउँछ ।
-ओखरमा पर्याप्त मात्रामा ओमेगा – ३, फ्याटी एसिड पाइन्छ । यसले कोलस्ट्रोललाई सन्तुलित गर्छ । नियमित रूपमा यसको सेवन गरे मुटु रोगबाट
छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
-यसमा एन्टी अक्सिडेन्टको गुण हुन्छ । यसले शरीरका विभिन्न पीडामा पनि राहत प्रदान गर्छ । ओखरले क्यान्सरबाट समेत जोगाउँछ ।
-ओखरमा भिटामिन इ हुन्छ जसले त्वचा सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति दिलाउँछ । यसले छालालाई सुन्दर र स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ ।
-ओखरको प्रयोगले अनावश्यक तौल कम गर्न सकिन्छ ।
Topics #ओखर #ओखर खादा हुने फाइदा #ओखरका फाइदा
Don't Miss it डण्डीफोर आउने कारण र हटाउने केहि घरेलु उपाय, यस्ता छन्
Up Next माछा स्वास्थ्यका लागि के – के फाइदा र बेफाइदा छ त ? थाहा पाउनुहाेस्
बकाइनो मध्य पहाडी तथा तराई भेकमा पाइने चाँडो बढ्ने एक प्रकारको पतझड समुहको रूख हो । तपाईहरुलाइ थाहानै होला बकाइनो…
यस्ता छन् प्राेटिनयुक्त खानेकुरा जुन मासु भन्दा बढी लाभदायक छन्
मासु मात्र प्रोटिनको एक मात्र स्रोत हो भन्ने सोच्नुहुन्छ ? तर मासु मात्र प्रोटिनको स्रोत भन्ने कुरा गलत हो ।…
अनाबश्यक रौं एकै दिनमा हटाएर चम्किलो र सफा अनुहार पाउन यस्तो प्रक्रिया अपनाउनुस
सामग्री काँचो दूध,तर, बेसार,बेसन बिधि – एक चम्चा काँचो दूधमा थोरै बेसन, एक चिम्टी बेसार र उमालेको दूधको तर मिसाएर…
आधा घन्टाको शारीरिक गतिविधिले तपाईं आफूलाई स्वस्थ महसुस गर्न सक्नु हुन्छ । जसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन । चिकित्सा…
मनोरोग लाग्नबाट यसरी जोगिन सकिन्छ
१. डरलाग्दा घटनाका भिडियो नहेर्ने। २. स्वस्थ खानेकुरा खाने, व्यायाम गर्ने र उचित आराम गर्ने। ३. धेरै गुलियो वा चिल्लो…